Koowheel yemagetsi sikuta kukurudzira zvakatipoteredza kudzivirirwa ruzivo - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel yemagetsi sikuta kukurudzira zvakatipoteredza kudzivirirwa ruzivo
Kune vazhinji vakakurumbira hoverboard sikuta muchiso , sei Koowheel rave yavose sezvavakatarirwa sezvo pamusoro gumi akangwara sikuta muchiso kwemakore akawanda? Tapota vhura Google browser, uye ipapo achisecha mazvi " nepakati sikuta nokutengesa ", vakawana kuti www.koowheel.com achazoburuka zita papeji yokutanga.
In-maviri wokutanga Century, zvinogona kunzi chete chenguva ndiye shanduko, mune kukurumidza kuchinja nguva iyi, kupona zvinorarama nyaya iri kufanorongwa ose zuva. Mune zvebhizimisi, shure kwete chete kunoreva kurohwa, zvinoreva rufu, chete kuramba utsanzi kuitira kuti zvebhizimisi zvikuru simba uye zvisingaperi kugwinya. China yemagetsi motokari indasitiri akasangana makore anopfuura makumi maviri okukura, makwikwi wakapinda chena inopisa Danho.
Koowheel sezvo wokutanga nyanzvi akangwara sikuta muchiso , kwagara kuzivikanwa nokuda kokutsamwa utsanzi, munhu aitarisira akati zvebhizimisi haisi itsva, hapana budiriro. Uye utsanzi haagoni kungogara pasi zvekushandisa chechetere, asiwo zvinofanira kuratidzei mumabhizimisi womuenzaniso, asiwo kutarisa mutengi wacho mutengi ruzivo.
Sezvo vose vanoziva, Kodak firimu, Nokia neserura, vaiva nebhizimisi umambo, asi ikozvino wakaderedzwa kuti kusauka, pfungwa zvakatarisana delisting. Chikonzero kukundikana kwavo nyore chaizvo, hapana utsanzi kusimba mune zvebhizimisi dzekuturika mikoko. Digital nguva yasvika, akangwara musabata nechidzitiro mbozha yasvika, vachiri kunakidzwa kukudzwa yakapfuura, haigoni ajairane enguva itsva, kupa nani nevatengi ruzivo.
Atarisana zvinodiwa itsva yaitonga, yemagetsi nepakati sikuta makambani kwete chete kuti pave vakarongeka mvura kurapwa maturo, asi kuteerera zvezvidzidzo fashoni, pamwe chete kwevanhu vapenyu kwezvakatipoteredza, kusika upenyu nani. Panguva ino, Koowheel yemagetsi nepakati sikuta leading brands are aware of this, obviously in the direction of continuous efforts.
Uyezve, makambani akawanda vanoziva mutengi yave kuziva zviripo zvigadzirwa havagoni kusangana zvinodiwa utsanzi. Utsanzi Izvi zvinokosha, asi kunzvimbo nezvikumbaridzo, iyo nzira achiri simba, anogona kuunza zvikomborero kuenderera yakaganhurirwa. Naizvozvo, kuti nepakati vhiri sikuta emakambani vanofanira kutakura pamusoro utsanzi maererano dzingangoitika vade yevatengi, zvakadai itsva zvigadzirwa kubva irreplaceable, nyore chaizvo kuti ave muimbi itsva kumusika.
Paraiitwa anosarudza mutengi kudiwa, mutengi kudiwa anosarudza remangwana chigadzirwa. Munguva pfungwa yemagetsi nepakati sikuta, Koowheel yemagetsi nepakati sikuta kuti "pasi kabhoni kudzivirira zvakatikomberedza, girini kufamba" unhu rwugare mhedziso mukana chigadzirwa, zvingakwanisa risingagumi.